ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစို ( စ/ဆုံး ) – Grab Love Story
ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစိုတယောက် ကျော်စွာတို့အခန်းထဲကို ရောက်လာတော့ သူတခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ ကျောင်းသားလေး ကျော်စွာကို တွေ့လိုက်ပါတယ။် ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစို ကျော်စွာဆီ လျှောက်လာပါတယ်။ ကျော်စွာဆီ တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်လာတဲ့ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစိုဟာ အရမ်းလှပါတယ်။ အသားအရေက ဝင်းဝါပီး အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းပါတယ်။ အဖြူရောင် ရင်ဖုံး အင်္ကျီလေးနဲ့ ကျောင်းစိမ်း ထမီလေးကို ခပ်တင်းတင်းလေး ၀တ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဆံပင်ကိုထုံးထားပီး သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေး နဲ့အရမ်းလှနေပါတယ်။ ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစို ကျော်စွာကိုမေးတယ်။
တဲ့ ကျော်စွာပြုံးနေလိုက်တယ။် ဘေးက သူငယ်ချင်တွေကလဲ ပြုံးလို့ပေါ။့ အဲတာနဲ့ ဆရာမလေးက
လို့မေးတယ်။ ဘယ်ဆရာ ဘယ်ဆရာမနဲ့မှမတည့်တဲ့ ကျော်စွာတယောက် ဆရာမရဲ့အသံလေးကြားတော့ တစ်ခါမှမခံစားဖူးတဲ့ ခံစားမှုမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်။
“မင်းက တော်တော်နမည်ကြီးတာဘဲ ဒီကျောင်းမှာ ဘောလုံးကန်တာ အရမ်းတြော်ပီး ခရိုင်ထိပါသလို ကျောင်းသူလေးတွေ ပါးစပ်ဖျားမှာလဲ မင်းက ရေပန်းစားတဲ့ kingတယောက်ဘဲ ပြီးတော့ မင်းနာမည်အကြီးဆုံးက ကျောင်းပြေးတာဘဲကွ အဲဒီတော့ မင်းဒီနေ့ ဆရာမအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါ မင်းကိုအပြစ်ပေးရမယ်”
ဘယ်ဆရာ၊ ဆရာမကမှပြောတာနားမထောင်တဲ့ ကျော်စွာ အလိုလိုနေရင်း ခေါင်းညိမ်ြ့ပီးသား ဖြစ်နေတယ်။ အဲတာနဲ့ကျောင်းဆင်းတော့ ကျော်စွာဆိုင်ကယ်နဲ့ဘဲ ဆရာမလေးက နောက်ကစီးပီး လိုက်လာပါတယ်။ ကျော်စွာရင်ထဲမှာ အရမ်းပျော်သွားတာပေါ့ ။
ဆရာမလေးစိမ်းစို ကျော်စွာခါးလေးဖက်ပီး လိုက်လာပါတယ်။ ကျော်စွာအရမ်းပျော်နေတယ် ။ ဆရာမလေးက သူ့ခါးဖက်ထားလို့လေ။ ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစိုရဲ့ကိုယ်သင်းရနံ့လေးက ကျော်စွာ့ရင်ထဲကို အေးမြစေတယ်။ ကျော်စွာဟာ ဆိုင်ကယ်ကိုဖြေးဖြေးမှန်လေးနဲ့မောင်းလာတယ် ။
တနေရာအရောက်မှာတော့ ခွေးတကောင် ဆိုင်ကယ်ရှေ့က ဖြတ်ပြေးလာတယ်။ အဲတာနဲ့ ကျော်စွာ လဲ ဘရိတ်ကို တအားဆွဲနင်းလိုက်တယ်။ အားပါးပါး ဘာပြောကောင်းမလဲ ဆရာမရဲ့နို့တွေက ကျော်စွာ့ကျောကို လာဖိတယ်။ အဆိုးဆုံးက ခါးဖက်ထားတဲ့ ဆရာမလက်က ကျော်စွာရဲ့လီးကို လာကိုင်မိပါတယ်။ အရှည် ၇ လက်မရှိတဲ့ ကျော်စွာလီးက ချက်ချင်းဘဲ တောင်လာပါတော့တယ်။
ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစိုလဲ ကျော်စွာ ရဲ့ချက်ချင်းတောင်လာတဲ့ လီးကို ကြက်သေသေပီး ဆက်ကိုင်ထားမိတယ်။ ကျော်စွာတော့ ဇောချွေးတွေပြန်နေပီလေ။ အဲတာနဲ့ ဆရာမသတိဝင်လာပီး ကျော်စွာ့လီးကို လွှတ်လိုက်တယ်။
“ဆောရီး နော် ကျော်စွာ”
ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစို ဆိုင်ကယ်ပေါ် သေချာအောင် ပြန်ထိုင်တယ်။ ဒီတခါတော့ ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစိုလဲ ကျော်စွာ့ကျောကို သူ့နို့တွေနဲ့ တအားဖိကပ်ပီး ထိုင်ပါတယ်။ လက်ကလဲ ခါးဖက်ထားတာထက် ကျော်စွာ့လီးနဲ့က တအားနီးကပ်နေပါတယ်။
ကျော်စွာတော့ ရင်တွေခုန်နေတယ်။ ဆိုင်ကယ်လှုပ်လိုက်တိုင်း ဆရာမလေးစိမ်းစိုလက်က ကျော်စွာလီးကို လာလာရန်စနေသလိုဘဲ။ အဲတာနဲ့ တနေရာအရောက် ကျော်စွာလမ်းရဲ့ ချိုက့်ခွက်တစ်ခုကို မြင်ပြီးပြုံးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမလေးစိမ်းစို ကျော်စွာနောက်မှာဆိုတော့ ကျော်စွာပြုံးတာကို မမြင်ပါဘူး။ ကျော်စွာဟာ ချိုင့်ခွက်ထဲကို ဆိုက်ကယ်မတော်တဆ ကျတာလိုနဲ့ ဆင်းချလိုက်တယ်။ ဆရာမလေးစိမ်းစိုလက် ကျော်စွာလိုချင်တဲ့နေရာကို တန်းပြီးရောက်လာတယ်။ ဒီတခါတော့ ဆရာမလေးစိမ်းစိုလဲ ကျော်စွာလီးကို ပြန်မလွှတ်တော့ပါဘူး။
ဆရာမလေးစိမ်းစို ကျော်စွာကျောကို ခေါင်းလေးမှီလာတယ်။ ပါးစပ်ကလဲ
ဆရာမလေး ရဲ့အိမ်ရောက်လာပါပီ။ ဆရာမလေးစိမ်းစိမ်းစို အိမ်ထဲရောက်တော့
“ဘာမှမစားချင်ပါဘူး ဆရာမ ရယ်… ဆရာမကိုဘဲ စားချင်တယ်… ဟဲ..”
တစ်လမ်းလုံး ကျော်စွာလီးကို အားရပါးရ ကိုင်ခံနေရမှတော့ ကျော်စွာပါးစပ်က ပြောထွက်ပြီပေါ့။
“ဒါဆိုခနလေးနော် ဆရာမ အဝတ်အစား လဲလိုက်အုံးမယ်”
“ဆရာမထွက်မပြေးတာထက် ကျနော့်ညီလေးက မရတော့ဘူး ဆရာမရဲ့”
ကျော်စွာပါးစပ်ကလဲပြော တစ်ပြိုင်ထဲ ဆရာမလက်ဆွဲပီး နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်တယ်။ နမ်းရင်းဆရာမလေး ရဲ့ပါးစပ်ထဲကို လျှာလေး ထိုးပေးတော့ ဆရာမလဲ အထဲကနေ သူ့လျှာနဲ့ ပြန်တုန့်ပြန်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျော်စွာ လဲ ဆရာမကို ပွေ့ချီပီး ဆရာမအခန်းထဲက ကုတင်ပေါ် အသာအယာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျော်စွာလဲ ဆရာမရဲ့ နို့တွေကို ညင်ညင်သာသာလေး အပေါ်ကနေကိုင်ပြီး အနမ်းမိုးတွေရွာနေပါတယ်။
“အင်း … ”
ချွတ်လေကျော်စွာ ဆရာမ ရဲ့ ရင်ဖုန်းအင်္ကျီ အဖြူလေးကို ချွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆရာမရဲ့ ဘော်လီကိုပါ ချွတ်လိုက်တယ်။ ပေါ်လာတဲ့ဆရာမနို့ တွေကို ကျော်စွာမျက်တောင်မခတ်တမ်း ကြည့်နေမိတယ်။
“ခုထိ ဆရာမလို့ခေါ်နေတုန်းပဲလား… မောင်ရယ်.. စိမ်းလေမရှက်တမ်းပြောရရင် မောင့်ကို မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတယ်.. စိမ်းကို အထင်သေးလာဟင်”
“ဘာခုမှ မ လဲ သူများပြောမှခေါ်တယ်”
ကျော်စွာပြောပြောဆိုဆိုဆရာမလေး ရဲ့နို့ကို စုပ်လိုက်တယ်။
ကျော်စွာ့ လက်ကဆရာမလေးရဲ့ ကျောင်းစိမ်းထဘီ ပေါ်ကနေအုပ်ပြီး ဆရာမ ရဲ့ အဖုတ်လေးကို ကိုင်လိုက်တယ်။ ဆရာမလေးကော့သွားတယ်။ ကျော်စွာလဲ ဆရာမကို နို့စို့ရင်းကနေ ဗိုက်သားလေးနမ်းတော့
ကျော်စွာ လဲဆရာမရဲ့ ကျောင်းစိမ်း ထမီလေးကို လှန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဆရာမ က အတွင်းခံ လုံးဝ ၀တ်မထားပါဘူး ။ ကျော်စွာ တစ်ယောက် ဆရာမပေါင်သားတွေနမ်းတော့ ဆရာမ ကော့ကော့လာတယ။် ဘယ်ဘက်ပီးတော့ ညာဘက် ဆရာမရဲ့ အဖုတ်လေးကြည့်တော့ အရည်တွေ ရွှဲနေပီ။ ကျော်စွာဟာ ပေါင်နမ်းရင်းကနေ ခြေသလုံးတွေနမ်းတယ်။ ပြီးတော့တဖြေးဖြေး ပြန်တက်လာတယ။် ဆရာမလေး ကော့ကော့လာတယ်။ ပြီးမှမပြောမဆို လျှာနဲ့ ဆရာမစောက်ပတ်ကိုအပြားလိုက် အမှတ်မထင် အောက် ကနေ ယက်လိုက်တယ်ဆရာမလဲ တခါတည်းကော့တက်သွားတယ်။
ကျော်စွာဟာ ဆရာမပေါင်ကိုအောက်ကနေ ပင့်မလိုက်တော့ ဆရာမစောက်ပတ်ကြီးက ပြူးပြီးထွက်လာတယ်..။
ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစိုလဲ ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ပေးတယ်။ ကျော်စွာကစောက်ပတ်ကိုဖြဲပြီး ယက်လိုက်တယ်။
ကျော်စွာစောက်ပတ်ထဲကို လျှာထိုးထည့်လိုက်တော့ ဆရာမရဲ့ပေါင်ကိုင်ထားတဲ့လက်တွေက ပြုတ်ပြီး ကျော်စွာခေါင်းကို လာကိုင်တယ်။
ကျော်စွားအားရပါးရယက်ပြီးတော့မှ ဆရာမလေးပေါင်ကြားကို နေရာယူလိုက်ပြီး ထည့်မလိုအလုပ်
ဆိုပီး ဆရာမလေး လဲ ကျော်စွာကို အိပ်ယာပေါ် အသာတွန်းလှဲလိုက်တယ်။
“မောင်က မကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတော့ မလဲ လုပ်ပေးချင်တယ်”
ကျော်စွာလဲ ဆရာမလေးမှုတ်တာကို အလူးအလိမ့်ခံနေရတယ်။
ဟင်….ဘာလို့လဲ မ….လုပ်ပေးတာ မကောင်းလို့လား”
“ဟုတ်ဘူး… အရမ်းကောင်း လို့ ပြီးကုန်မှာ စိုးလို့ပါ.. ဟော့ဒီ…မောင့် လီးကြီး နဲ့..မ ကို လိုးချင်သေးတယ် ”
မကလဲ လိုးတာကိုလိုးတယ်လို့မပြောတော့ ဘယ်လိုပြောမှာလဲ”
မသ်ိဘူးကွာ… မ နားရှက်တယ်”
ကျော်စွာလဲ ဆရာမလေးပေါင်ကြားကို နေရာယူလိုက်တယ်။
ဖြေးဖြေး လုပ်နော်…. မ ကြောက်တယ်..”
ကျော်စွာဟာ လီးကိုစောက်ပတ်ထဲမထည့်သေးပဲ စောက်စေ့လေးကို လီးနဲ့အပေါ်အောက်ဆွဲ ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်…။
“မသိလိုပေါ့ မရဲ့… ဟဲဟဲ ”
အာ မောင်ကလဲကွာ မောင့်ရဲ့လီးကို မစောက်ပတ်ထဲ ထည့်ပေးပါတော့နော် မအရမ်းယားနေပီ..”
“ဟုတ်ကဲ့ … ထည့်ပြီနော် မ…”
ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစို တယောက် အရှက်တရားတွေ မရှိတော့ပဲ တောင်းဆိုနေပါ ပြီ။ ကျော်စွာလဲ ဆရာမလေးရဲ့ကျောင်းစိမ်း ထမီလေးကို ခါးအထိ လှန်တင်လိုက်ပြီး လီးကြီးကို စောက်ပတ် အ၀မှာ တေ့ပြီး ဆောင့်လိုး လိုက်ပါတယ်။
ကျော်စွာ့ ရဲ့လီးတစ်ဆုံးဆရာမလေး စောက်ပတ်ထဲဝင်သွားတော့
“အားးးးမောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ နာနာဆောင့်ပေးပါနော် … မ ပြီးတော့မယ်.. အားးးးဆောင့်ပါ နာနာဆောင့်ပါ မောင်ရယ်..”
ကျော်စွာလဲ ဆရာမလေးကတောင်းဆိုနေတော့ မီးကုန်ယမ်းကုန် ဆောင့်ပါတော့တယ။်
“မောင်…ဆောင့် နာနာဆောင့်…နာနာလေးလိုးပေးပါ မောင် ရယ်…”
အချက်ငါးဆယ်လောက် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်တော့ ဆရာမလေးကော့တက်လာပြီး ငြိမ်ကျသွားတယ်။ ကျော်စွာလဲ တပြိုင်နက်ထဲ ဆရာမလေးရဲ့စောက်ပတ်ထဲကို လီးရည်တွေ အကုန် ပန်းထည့်လိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်သား ကာမဘုံ ထိပ်ဆုံးကို အတူတက်လှမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ကုတင်ပေါ်မှာ တယောက်နဲ့တယောက် တင်းတင်း ကြပ်ကြပ် ဖက်ထားပါတယ်။ ဆယ်မိနစ်လောက်နေမှ….
“မ…က ပိုချစ်တာပါနော် ဟီးးး”
ဆိုပီးကျော်စွာလည်း ဆရာမလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်တယ်။
အဲဒီနေ့ကစပြီး ကျောင်းသားလေးကျော်စွာနဲ့ဆရာမလေး စိမ်းစိမ်းစို တို့နေ့တိုင်း လိုးကျပါတော့တယ်။